Relax kwaye uphumle eLas Lajas Beach House - I-Airbnb
Relax kwaye uphumle eLas Lajas Beach House
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguMichael
Indlu yaseBeach ikwindawo ezolileyo kwidolophu yaseLas Lajas kunxweme lwePasifiki ePanama.
Isicwangciso esivulekileyo esikhanyayo nesinomoya sivumela ukuba kube lula ukuhlalisana. Amagumbi okulala amathathu atofotofo kunye negumbi lokuhlambela eli-2 lihlala ukuya kuthi ga kwiindwendwe ezi-6.
Indawo yokuphumla kwipatio egqunyiweyo, phumla kwi-hammock okanye udada echibini ngelixa uphepha ubushushu bemini. Kamva, yonwabele iingokuhlwa ezipholileyo ngeglasi yewayini kunye nesidlo sangokuhlwa.
Siya kukuvuyela ukukwamkela kwiNdlu yoLwandle kwaye wenze iholide yakho ibe yeyodwa!
Ipropathi ibiyelwe ngokupheleleyo kwaye inesango lokhuseleko lwakho. Indlu enkulu inamagumbi okulala ama-3/2 yokuhlambela eneplani evulekileyo enekhitshi, indawo yokutyela kunye neendawo zokuhlala.
Amagumbi okulala anokumkanikazi okanye iibhedi ezinobungakanani obugcweleyo, indawo eyaneleyo yokunxiba, kunye neelinen ezitofotofo. Amagumbi okuhlambela aneshawa kwaye atyunjwe ngeetawuli ezifukufuku. Igumbi lokulala elikhulu linebhafu ye-en-suite. Ibhafu yeendwendwe iphakathi kwamanye amagumbi amabini okulala.
Igumbi lokuhlamba impahla, elingaphandle kwekhitshi, linewasha kunye nesomisi.
Iqula liphakathi kwendlu enkulu kunye nestudiyo somgcini. Umgangatho wedama lesamente kunye nepatio egqunyiweyo enetafile yokutyela yangaphandle kunye nemibalabala, ii-hammocks ezenziwe ekhaya zilindele ulonwabo lwakho lokuhlala.
Igadi inezityalo ezishinyeneyo kunye nendawo enkulu yengca ngasemva kwendlu.
Ikhaya lixhotyiswe ngejenereyitha kunye namanzi omthombo. Umlondolozi osisigxina uhlala kwipropathi.
Ikhapoti egqunyiweyo ibekwe phantsi kwestudiyo somgcini.
Indawo ethe cwaka elunxwemeni inabantu abambalwa abanamakhaya osapho olunye kunye neerenti zeeholide. Ujikelezwe yindalo. Iintaka ezininzi zasekuhlaleni zityelela kwisiza. Ulwandle luvakala endlwini.
Kukho umlawuli wepropathi okwisiza ofumaneka ngoqhagamshelo oluthe ngqo kunye nangemiyalezo ye-AirBnB.
Indawo yokuhlamba impahla kwabelwana ngayo ngoku. Umphathi wepropathi akayi kufikelela kwindawo yokuhlamba impahla ngaphandle kolungiselelo lwangaphambili.
Indawo yokuhlamba impahla kwabelwana ngayo ngoku. Umphathi wepropa…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Las Lajas